Wasiir Cawaash” Heerkii Jariifka xeebaha Puntland aad buu hoos ugu dhacay”(dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 14, 2019 4:20 b 0
Tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya, dalkuna uu galay dagaalo sokeeye wixii ka dambeeyay 1991kii xeebaha Soomaaliya waxaa si sharcidaro ah uga kaluumaysanayay doonyo laga leeyahay waddamada Iiraan iyo Yaman.
meelaha sida gaarka ah doonyahaasi ilaa iyo haatan ay sida sharcidarada uga kaluumaystaan waxaa ka mid ah xeebaha bari ee Puntland.
Wasiirka wasaarada kaluulaysiga Puntland Faarax Cawaash ayaa sheegay in jariifkii xeebaha Puntland uu hoos udhacay sanadkan kadib markii la helay tignoolajiyad lagula soconayo doonyaha jariifka ah.
waxa uu sheegay wasiirka in ay shati siiyaan Maraakiibta sida sharciga ah ukaluumaysta ee iska soo diiwan galiya wasaarada kaluumaysiga.
Xisbulah oo u hanjabaad Israa’iil